LuckyMetrics: Fanaraha-maso fampisehoana karama tsotra | Martech Zone
LuckyMetrics: Fanaraha-maso fampisehoana karama tsotra
Talata, May 28, 2013 Zoma, Jona 19, 2015 Douglas Karr
Ny salan'ialanao Analytics fonosana dia mety ho mavesatra be raha toa ianao ka manandrana manara-maso fotsiny ny zava-bitan'ny karama sy ny karoka. LuckyMetrics dia Analytics sehatra izay mifangaro amin'ny Google Adwords, Bing Ads, Clickbank, AWeber, Mailchimp ary PayPal hanome anao ny metatra ilainao hanaraha-maso sy hanatsara ny fahombiazan'ny fikarohana sy karoka.
Iza amin'ireo faritra jeografika no mahazo tombony?
Iza amin'ireo ora isan'andro? Andro iza amin'ny herinandro?
Iza amin'ireo teny lakile tokony hanajanonana ny tolotrao, iza no tokony hampiakarinao ny toloanao?
Fanamarihana: nampidirinay amin'ity rohy ity ny rohy Affiliate LuckyMetrics.
Ahoana ny fampiasantsika ny fitaovana sosialy any am-piasana